Arsenal Oo Lagu Garaacay Coutinho, United & Lacagtii Sucuudiga La Tartamaysa Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Maanta Oo Jimce Ah - Gool24.Net
Arsenal Oo Lagu Garaacay Coutinho, United & Lacagtii Sucuudiga La Tartamaysa Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Maanta Oo Jimce Ah
Haddaba waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey ee maanta oo Jimce ah ay qoreen wargeysyada waaweyn ee Yurub:
Leicester City ayaa u bandhigtay xiddiga Liverpool dhexda uga ciyaara ee Adam Lallana heshiis waqti dheer ah. 32 jirkan reer England ee heerka caalami ah ayaa uu qandaraaskiisa Anfield dhamaanyaa bisha June. (Football Insider)
Real Madrid wali may helin wax dalab ah oo laga soo gudbisay weeraryahanka Wales ee Gareth Bale oo ah 30 jir heshiiskiisa uu sannad ka hadhsan yahay. (Marca)
Manchester United iyo Newcastle ayaa xiisaynaya laacibka garabka ka ciyaara ee reer Uruguay ee Facundo Pellistri. 18 jirkan ayaa waqtigan u ciyaara kooxda Penarol. (Mail)
Laba ka mid ah kooxaha waaweyn ee Yurub ayaa xidhiidh la sameeyey wakiilka khadka dhexe ee Chelsea iyo xulka Talyaaniga ee Jorginho, si ay ugala hadlaan haddii ay heli karayaan 28 jirkan. (Radio Musica Telefision)
Tottenham ayaa loo sheegay inay la saxeexan karayaan xiddiga xulka Brazil iyo Barcelona ee Philippe Coutinho oo ay amaah £8 milyan ah hal sano ku qaadanayaan. 27 jirkan ayaa amaah ugu maqan Bayern Munich. (Football Insider)
Galatasaray waxay doonaysaa inay la saxeexato garabka Bournemouth ee Ryan Fraser. 26 jirkan oo heshiiskiisu dhamaanayo bisha June ayaa hore loola xidhiidhinayay Arsenal iyo Tottenham. (Daily Records)
Everton waxay wada-hadallo la yeelatay difaaca Djibril Sidibe si ay ugu dheerayso heshiiska amaahda ah marka uu xili ciyaareedku dib u bilaabmo bisha June. Difaacan Faransiiska u dhashay ee 27 jirka ah oo ay amaah kaga soo qaadatay AS Monaco ayaa dib uga noqonaya June 30. (Liverpool Echo)
Shanghai Shenhua ayaa kasoo dabacday halkii ay ka taagnayd weeraryahanka reer Nigeria ee Odion Ighalo, waxaanay ogolaanaysaa inuu heshiiska amaahda ah u kordhiyo Manchester United. (ESPN)
Arsenal waxay dusha kala socotaa difaaca Brazil iyo kooxda Lille ee Gabriel. 22 jirkan ayuiu qiimihiisu yaahy £27 milyan, waxaana sidoo kale bartilmaameed uu u yahay Everton. (Le10Sport)
Atalanta ayaa la sheegay inay Chelsea kala heshiisay laacibka khadka dhexe ee Mario Pasalic oo ah 25 jir amaah ay ku haysatay, waxaanu hadda si ramsi ah uga mid ahaan doonaa kooxda reer Italy. (Tuttosport)
Paris St-Germain ayaa ku dhow inay heshiiskii amaahda ahaa ee Mauro Icardi u beddesho rasmi. 27 jirka reer Argentine ee ay amaahda kaga soo qaadatay Inter Milan ayuu heshiiskiisu dhamaanayay 31 May. (Sky Sports)
PSG waxa kale oo ay ka fiirsanaysaa inay u dhaqaaqdo kubbad-sameeyaha Chelsea ee Willian. 31 jirkan ayaa si xor ah uga tegi doona Blues marka uu dhamaado heshiiskiisa bisha June. (Le10Sport)
Inter Milan waxay kordhin doontaa heshiiska difaacii hore ee Manchester United ee Ashley Young. 34 jirkan reer England ayaa ku biiray Inter bishii January, isaga oo saxeexay lix bilood oo qandaraas ah. (Telegraph)
Garabka weerarka xulka qaranka England ee Jadon Sancho ayaa dareensan inay culays ku hayaan wararka ku xidhiidhinaya inuu ka tegi doono Borussia Dortmund, sida uu sheegay saaxiibkiisa ay isku kooxda yihiin ee Thomas Delaney. Sancho oo 19 jir ah ayaa lala xidhiidhinayaa Manchester United. (ESPN)